China Okumnyama Green Brocade China Manufacturers & Suppliers & Factory
Okumnyama Green Brocade - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Okumnyama Green Brocade)
Indwangu emnyama ye-Green Green Bro Broacard Fabric
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bezokwakha indwangu yaseJacquard enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka engu-10. Indwangu yethu emnyama yokuphrinta eluhlaza imboza iphethini le-jacquard, indwangu ye-geometric iphethini ehlanganisiwe, i-metallic yarn jacquard nokunye. Lesi sitayela...
Isembozo Sobuso Esivikelekile seMask Green
Umbala: luhlaza Isicelo: ngaphandle Ukusetshenziswa: ukuvikela uthuli Isisindo: 35g Iphakheji ； polybag Ukucaciswa: 14 *
I-Light Green Beaded Handmade Pearl Tulle Lace
Izindwangu zethu eziluhlaza eziluhlaza okotshani zenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjwa ngesandla, ngakho-ke umucu wethu webhulukwe lobuhlalu uthambile futhi uthambile. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi, okokugqoka komshado nokufakwa...
Indwangu yethu ye-Green Green Embroidery Handmade Beaded eyenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjeke ngesandla, ngakho indwangu yethu yokufekethisa emnyama iyanethezeka futhi ibucayi. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi, okokugqoka komshado...
Indwangu ekhanyayo ye-Green StoneTulle Embroidery
Indwangu yethu yokukhanya ye-Light Green 3D StoneTulle Embroidery yenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjwa ngesandla, ngakho-ke indwangu yethu eluhlaza imbala eluhlaza e-3d iyanethezeka futhi ibucayi. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi,...
Indwangu ye-Pink Green Beaded Embroidery Netting
Indwangu yethu ye-Pink Green Beaded Embroidery Netting yenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjwa ngesandla, ngakho-ke ubuhlalu bendwangu yethu eyenziwe ngendwangu buthanda kakhulu futhi buthambile. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi,...
Indwangu ye-Green African Net Lace Pearl Embroidery imibalabala kakhulu, ibukeka kabi futhi inomqondo oqinile wokwenza kanye nephethini yokulinganisa. Izingubo ezenziwe ngendwangu ye-african net lace zibukeka kahle futhi zibukeka ngamehlo. Nge-100% ye-polyester impahla, izindwangu zezimbali zeleyili akulula ukufiphala...
Okumnyama Green Brocade
IGreen Yellow Brocade
Hot Orange Brocade
Okumnyama okungumbala we-Pearl Embrodiery
I-Green Green Lace